Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l1312 lak
Fanehoam-pitiavana amin'ny fomba henjana (2Tes 3.13-15)
Alakamisy 27 Sept.
Araka ny voalazan’ny Matio 18:15-17, inona no fihetsika tokony hasehon’ny fiangonana amin’ny olona iray nampiharana fitsipika, nesorina tsy ho mambran’ny fiangonana?
Ny fampiharana fitsipika amin’ny mambra manao fahadisoana no anisan’ny olana sarotra indrindra atrehin’ny fiangonana anankiray. Matetika ny mambra mania iray, dia tsy iza fa rahalahin’ny mambra anankiray hafa, na reniny, na zanany, na zanaky ny mpiray tam-po amin-drainy na amin-dreniny, na koa ny namany akaiky indrindra. Misy mambra sasantsasany tsy mankasitraka mihitsy ny fampiharana izany; ao ihany koa anefa ireo tia mampihatra sazy henjana dia henjana. Amin’ny fomba ahoana àry no hahafantaran’ny fiangonana ny sitrapon’Andriamanitra eo anivon’izany tombonsoa rehetra mifanohitra izany?
Fomba tsotra sy mazava no atoron’ny Matio 18. Dingana voalohany, miresaka mifanatrika ilay olona nanafintohina sy ilay olona tafintohina. Asehon’ny tontolon-kevitra fa ny famelan-keloka no tena tanjon’izany fifampiresahana izany, isak’izay azo atao (Mat.18:21-35). Dingana faharoa, mitondra vavolombelona iray na roa ilay mambra tafintohina mba tsy hisian’ny savorovoro eo amin’ny resaka ataon’ny andaniny na ny ankilany. Rehefa notanterahina tsara an-tsakany sy an-davany ireo dingana roa voalohany ireo izay vao tokony hoentina eo anatrehan’ny fiangonana amin’ny fotoana fivoriambe fiheverandraharaha ilay olana. Rehefa tsy mety mihaino ny fananaran’ny fiangonana iray manontolo ilay nanao fahadisoana, dia atao tahaka ny “Jentilisa sy ny mpamory hetra” (Mat. 18:17) izy.
Eto indrindra no olana. Inona no hevitr’izany hoe atao tahaka ny Jentilisa sy ny mpamory hetra ny olona iray? Misy fomba anankiroa samy hafa azo andraisana izany. Voalohany, mety asain’i Jesôsy mihataka amin’ilay nanao fahadisoana ny fiangonana tahaka ny nihatahana tamin’ny Jentilisa sy ny mpamory hetra teo amin’ny fiarahamonina nahabe Azy. Faharoa, mety ho antso ihany koa io hanehoana fihetsika amin’ilay nesorina tsy ho mambra, araka ny fihetsika nasehon’i Jesôsy tamin’ny Jentilisa sy ny mpamory hetra (izany hoe, amin’ny fangoraham-po sy ny famelan-keloka).
Inona no ambaran’i Paoly momba ny fitsipika mifehy ny fiangonana? 2 Tes. 3:13-15. Fihaikana lehibe tokoa ny fampiharana araka ny tokony ho izy ny Matio 18 sy ny 2 Tesalônianina 3 eo amin’ny fiainam-piangonana amin’izao vaninandro izao. Tsy mitovy avokoa ny olona rehetra. Tsy misy toe-javatra anankiroa tena mitovy tanteraka. Amin’ny tranga sasany ny famelan-keloka, dia manalefaka ny fon’ilay nanao fahadisoana ary mitondra fampihavanana ao am-piangonana. Amin’ny tranga hafa kosa, ireo nanao fahadisoana kanefa nanjary mafy fo dia tsy mihontsona raha tsy amin’ny fanehoampitiavana amin’ny fomba henjana ihany, fanehoam-pitiavana amin’ny fomba henjana izay afaka hiatrika sy hitantana izay vokany eo. Izany no antony mahatonga ny Foibe manerantany tsy hanongana mambra. Ny raharaha saro-pady toy izany, dia tsara indrindra raha ny fiangonana eo an-toerana ihany no mandinika ny momba azy, satria izy no tena mahafantatra tsara ilay nanao fahadisoana.
Tsy natao hahafahana manaram-po amin’ny fampiharana fitsipika ny fanehoampitiavana amin’ny fomba henjana. Araka ny voalazan’ny and. 15, ilay olona nampiharana fitsipika dia tokony hoentina tahaka ny fianakaviana hatrany. Tokony ho tsapan’ny fiangonana mandrakariva fa ilay nanao fahadisoana dia rahalahy “nanoloran’i Kristy ny ainy” (Rôm. 14:15; 1 Kôr. 8:11) ihany koa.
Efa nisy fampiharana fitsipiky ny fiangonana ve niainanao? Ahoana no fomba ahafahan’ny fiangonana mandanjalanja hoe tokony hifanandrina amin’ilay nanao fahadisoana ve izy sa tokony handray azy?